(Emelitere ikpeazụ On: 27/09/2020)
Ò nwetụla mgbe ị chọrọ ileta Europe site ihe Devid agụghị ndị gbara, dị ka a ụgbọ okporo ígwè? Olee otú ọ na-ada na-eme njem ruo 300 Kilomita kwa hour? Europe nwere a nnukwu netwọk nke elu-ọsọ ụgbọ oloko ga-ewe gị ngwa ngwa ka ị na-aga. Akwa-agba ụgbọ okporo ígwè ọrụ naanị kwụsị na isi obodo. The ụgbọ oloko na-enye ala ugbala nke 1st na 2nd klas, nakwa dị ka ezi isi nri ọrụ. Ebe a bụ ihe ndị ọzọ banyere kasị ọsọ ụgbọ oloko na Europe.
ICE ụgbọ oloko na Europe jikọọ niile isi obodo na Germany na ọtụtụ obodo na mba ndị agbata obi. A nke oge a elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè na hour obula ọrụ awade a ọtụtụ: ihe ndị ọzọ, ugbala ntụ oyi, nnukwu ohere iji gbatịa ụkwụ, video ákwà na audio usoro. ICE ga-eburu gị ebe ọ bụla na Germany na ọ bụ ụzọ dị mma iji gaa mba ndị ọzọ, dị ka Austria, France, na Switzerland.
akụ ụgbọ oloko (mabu dị ka Eurostar Italia) eme ka elu a na netwọk nke oge a elu-ọsọ na ha bụ Italian contender na kasị Ụgbọ oloko na Europe. Travel na akụ na-enwe a ngwa ngwa njikọ ahụ obi ọtụtụ Italian obodo ndị dị otú ahụ dị ka Rome, Venice, Florence, Milan, Verona, na Naples. E nwere atọ ụdị nke Le Frecce ụgbọ oloko na obi sie gị ndị kasị ekwe omume njikọ bụghị nanị na ndị kasị ewu ewu obodo Italy kamakwa nke nta nke Italian obodo.
Ịwa nile France na karịrị, TGV esetịpụ ụwa ọsọ ndekọ maka ot ụgbọ oloko. on 3 April 2007, TGV POS ụgbọ okporo ígwè ruru 357.2 mph (574.8 km / h), eme ka ọ na-ise kasị ụgbọ okporo ígwè na Europe. TGV trainset ọbụna ruru 515.3 km / h (320 mph) n'okpuru pụrụ iche ule na ọnọdụ na mgbe akwusila site ọnọdụ ihu igwe dị ka oké foogu ma ọ bụ ndị ọzọ.
Train à Grande Vitesse ga-ewe gị na a ihunanya ụgbọ okporo ígwè njem na Paris ma ọ bụ n'ebe ọ bụla tinyere Mediterranean mben ọ bụrụ na ị ka, Biko. Zụrụ a TGV tiketi na enwetaghị a nkiri na ụwa na-ama Cannes na-enwe mara mma ubi vaịn nke Loire Valley, emesia. Tinye a obere ihe njem gị na-agba ịnyịnya site na ịga na obodo ndị dị otú ahụ dị ka Marseille, Lyon, na Bordeaux.
The SJ Swedish elu-ọsọ bụ otu n'ime ndị kasị ụgbọ oloko na Europe na-e kpọmkwem maka Scandinavian teren na-agba ọsọ na a ọsọ nke ruo 200 Kilomita kwa hour. Ndị a ụgbọ oloko na-enye a elu larịị nke nkasi obi na-ekwe ka ị na-eme njem ngwa ngwa na etiti nke ọtụtụ Swedish ukwu ndị dị ka Stockholm, Gothenburg, na Malmo. Ndị a elu-ọsọ ụgbọ oloko nwekwara njem ozugbo Copenhagen (Denmark) via ndị fọdụrụ n'ezinụlọ ụzọ na okporo ígwè akwa na Europe, na ikpọ Oresund Bridge.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhich-are-the-fastest-trains-in-europe-and-the-world%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#ngwa ngwa #highspeedtrain ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel